Shekinah Kubwinya kwaMwari. BNL Ministries - sn06
Nzvimbo inogara Mwari.
Saizi yakazara izere inowanikwa kubva...
Tabhenekeri yaMosesi musango.
(Copyright - Mark uye Jody McNulty)
Tabhenekeri yaMwari muRenje chakanga chakafanana netende, yakagadzirirwa kubviswa ndokuenda kunzvimbo inotevera, sezvo vanhu akaenda kunyika yechipikirwa. Mwari akapa dhizaini kunaMosesi muna Ekisodho 25:8-9,
8 “Ipapo uite kuti vaite nzvimbo yangu tsvene, uye ini ndichagara pakati pavo.
9 Muite tabhenakeri iyi nemidziyo yayo yose nomufananidzo wandichakuratidza.
Dhavhidhi aida kuvaka tembere isingaperi kunaIshe asi akadziviswa kubva kuzviita. Mwari vakamuudza muna 1 Makoronike 28:6,
6 Akati kwandiri, ‘Soromoni mwanakomana wako ndiye achavaka imba yangu nezvivanze zvangu, ndichava baba vake.
Pakadzoka vanhu kubva kuutapwa kuBhabhironi vakavakazve tembere. Izvi zvakatora makore 49 kuti vaite, ichi chiverengero chakakosha nekuti chinoratidza nguva yenguva kuti chiporofita chiri muna Danieri 9:25 chiitike. Mavhiki manomwe ekuvakazve tembere. Vhiki 1 = makore manomwe (kana 1 zuva = gore 1). Izvi zvinotibvumidza kuverenga nguva apo Mesia aizoonekwa (KwaKristu Kubhabhatidzwa - ndipo paakava "iye muzodziwa") muJerusarema. Mavhiki manomwe wedzera kune mavhiki makumi matanhatu nemaviri = Makore 483. Izvi zvakanga apo Kristu akazviratidza uye akabva arovererwa pakati pevhiki makumi manomwe. Izvi zvinosiya hafu vhiki (makore 3.5) zvichiri kuitika kuvaJudha.
Zvinofanira kutaurwa kuti magwaro akati: (Dhanieri 9:25),
Uzive uye unzwisise izvi: Kubva pakupiwa kwechirevo chokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira Muzodziwa, iye mutongi, auya, kuchava nevhiki nomwe uye vhiki makumi matanhatu nembiri. Richavakwa rine migwagwa uye nomugero, asi munguva dzokutambudzika.
Paive nemirairo mina, vatatu kuvaka Tembere (Ezira 6:14), uye wechina wokuvakazve Jerusarema (Nehemia 2:7). Ndicho wechina izvo chiporofita chinoshanda kune.
Model yeTembere yaHerodhi. Munenge 30ad.
Herodhi akawedzera kuTembere yechipiri. Izvi zvakazvitendera kuti zvidzorerwe kusvika pakukwirira kwepakutanga, sezvakaitwa naSoromoni.
Mwari anogara kupi nhasi.
Muna Mabasa Chitsauko 2, pane chiitiko chakanyorwa, apo Mwari (Mweya Mutsvene) yakauya muchimiro che “Ndimi dzeMoto”, ndokuzorora pamusoro wemutendi wega wega. Kune Mukristu izvi zvinozivikanwa se “Rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene”. Ndezve mutendi wese, sezvakataurwa naPetro muna Mabasa 2:38,
...“Tendeukai mubhabhatidzwe, mumwe nomumwe wenyu, muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu, uye mugogamuchira chipo choMweya Mutsvene.”
Zvinorehwa neTemberi dhizaini.
Tembere iri kuJerusarema yakanga ine kuruvanze rwokunze, nzvimbo inoyera, nenzvimbo dzvene-tsvene uko Mupristi Mukuru aipinda kamwe pagore, vakatakura Ropa rekuregererwa zvivi zvevanhu. Maitiro etembere anomiririra munhu, nomuviri (rwokunze), mumweya (nzvimbo tsvene), uye mutsvene-tsvene (mweya) apo shekinah kubwinya kwaMwari unogara, uye apo areka yesungano anogara (Shoko raMwari).
Vanhu vazhinji vanozviti maKristu, handina kumbova neMupristi Mukuru (Jesu Kristu) kupinda kutakura ropa rekuyananisa.
VaKristu vazhinji vane chiitiko kumusoro uye pasi - sechiedza chiri muchivanze chekunze (masikati neusiku). Vamwe vakapinda munzvimbo inoera, (hupenyu mukereke) - chiedza chinogara chichiita asi chakavanzika, kubva pachigadziko chendarama [menorah] (anomirira mazera chechi nomwe). Asi havana kupinda seri kwechifukidziro apo chiedza iko kuvapo kwaMwari.
Shongwe yeMoto. Shongwe yeGore.
Mwari anopindura Eria nemoto.
Chikuru musiyano pakati muchiJudha uye zvadaro chiKristu, kubva kune zvimwe zvitendero zvese, ndiko kuvapo kwe “Shekinah” Kubwinya kwaMwari - Shongwe yeMoto.
Mwari akatungamira vanhu vake, Israeri, neShongwe yeMoto pakati pehusiku, uye Shongwe yegore masikati. Icho chinofanira kuve chakave chinobwinya. Chinhu chinonakidza ndechekuti kunyange chichijekesa Israeri, rakanga riri rima guru kuvavengi vavo.
Apo Eriya akapa chibayiro paGomo reKameri, Mwari akapindura munyengetero wake nomoto.
Nguva yaEria payakapera paPasi, iye wakakwidzwa kubudikidza ngoro dzeMoto.
Jesu paakashandurwa pagomo chiso chake nenguo dzaipenya yakajeka.
Pauro akasangana naShe munzira yeDhamasiko, neunovhenekera rakajeka. Akati “Ndimi aniko Ishe?”,
“Ndini Jesu” yakauya mhinduro.
Shongwe yemoto - Houston 1950.
MuHouston, Texas muna Ndira 1950, mufananidzo unoshamisa wakatorwa neDouglas Studios. Mumufananidzo uyu pakabuda chiedza pamusoro pemusoro waHama Branham mune halo kunge chimiro. Izvo zvakashata zvakaongororwa naGeorge J. Lacy uyo aiva FBI muongorori akabvunza magwaro. Izvi kwaiva kuona kana chiedza kungadai kwakaguma nei kukodzera ekisiposha, kukura kana retouching. Kuongorora kwakashanda kunyatsojekesa chokwadi kuti kupenya kwakakonzerwa nechiedza chakarova zvisina kunaka. Mufananidzo uyu wakasungirirwa muHoro yeChinamato muWashington DC, sezvo chete remweya mashura ave achifotwa.
Dhawunirodha (Chirungu) 53-0509 Pillar of Fire. - William Branham
Zvino Mozisi akanga achifudza makwai aJeturo tezvara wake, muprista weMidhiani, uye akatungamirira makwai kurutivi rwuri kure mugwenga akasvika kuHorebhi, gomo raMwari.
Ikoko, mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumarimi omoto aiva mugwenzi. Mozisi akaona kuti kunyange zvazvo gwenzi rakanga richipfuta, rakanga risingatsvi.
Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene, ari mamuri, uyo wamakagamuchira kubva kuna Mwari? Hamuzi venyu;
makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nomuviri wenyu.
1 VaKorinde 6:19‭-‬20
musoro waHama Branham.
Kristu. Iye Ari